PressReader - Isolezwe ngeSonto: 2017-05-28 - UNala uxwayisa abesifazane ngesithembu
UNala uxwayisa abesifazane ngesithembu
Uthe amadoda kufanele ahlukane nomkhuba wokudlela ngaphansi kwamatafula awaphumele obala ngesithembu sawo ngoba vele ayasithanda.
“Ungathuka isimanga ukuthi baningi kanjani abantu abathanda isithembu, kodwa basaba ukuthi bazoyiqala ngaphi le ndaba kumama wekhaya. Ngiyajabula uma kuvezwa lolu hlelo ngoba ngagxekwa ngesithembu sami mhla ngiphumela obala ngaso. Kodwa ngiyajabula ngoba abanye bayangincoma ngesibindi sami.”
Phambilini kuke kwasuka ukukhuluma ngoMengameli Jacob Zuma egxekwa ngokuthatha isithembu.
Abaningi bakhala ngokuthi esithenjini kuphilwa impilo yokuthakathana, ubuxoki, amanga, inhlebo nosizi ngoba indoda isuke ibhekene nomthwalo onzima wokwenelisa umndeni omkhulu ngezidingo zokuphila. Amadoda athi bathatha bephindelela ngoba abesifazane ngokwesibalo sabo emhlabeni bancane uma kuqhathaniswa namadoda.
Kwesinye isikhathi bathi basiboniswe ngamadlozi emaphusheni noma umuntu ethi uthathela umfowabo owashona engaganiwe manje uyamhlupha ufuna umakoti.
Ungoti wezamasiko uSolwazi Sihawukele Ngubane, uthe ubona sengathi abesifazane sebezoziphosa esithenjini ngoba belandela ibhodwe eliconsayo ngendlela isithembu esikhangiswa ngayo kuthelevishini nasemaphepheni.
“Isithembu sakuqala kwakuba yinto ubaba wekhaya ayithatha ngesizathu sokuthi unkosikazi wakhe udinga umuntu ozomsiza ngemisebenzi yasekhaya noma kube yinyanga enomuzi omkhulu kufika abantu abehlukene igcine isibona umuntu ongaba unkosikazi,” kusho uNgubane.
Uthe kodwa lokhu sekungase kushintshe manje ngoba baningi abesilisa abayizimpunyela abanamathenda nokunye okubafakela imali abazogcina benesithembu ngenxa yemali yabo hhayi ngoba belandela isintu. Ukhale ngokuthi kunzima manje ukuthi kusuke uphuya athathe isithembu ngoba impilo isiyabiza idinga ube nemali.
UNgubane uthe lolu hlelo lukaMseleku luhle kodwa kufanele liveze konke nezinkinga eziba khona esithenjini ngoba ngeke bahlale bengaxabani abesifazane begane indoda eyodwa. Uthe indlela owakhiwe ngayo umuzi kaMseleku incikile esikweni lesintu ngoba yinxuluma bese kuhlukana izindlu zamakhosikazi wathi kwakwenziwa najalo nasekuqaleni.
Okhulumela iCommission For Gender Equality uMnuz Javu Baloyi, uthe bayaseseka isithembu kodwa uma kuya ngokuthi siqhutshwa ngendlela efanele kungabibikho ukuhlukumezeka kwabesifazane ngenxa yaso.
UMnuz Cyril Mncwabe okhulumela uMnyango wezaseKhaya KwaZulu-Natal, uthe umthetho omile owokuthi umuntu othola isitifiketi somshado esithenjini kuba unkosikazi oshade ngokwesilungu.
Abanye kuthathwa ngokuthi bashade ngokwesintu kodwa kudingeka imvume kankosikazi omdala.